स्टेभन स्मिथ अर्थात् ‘द रन मेसिन’
२०७६ भदौ २५ बुधबार १५:३९:००
काठमाडौं । क्रिकेट समर्थकका लागि स्टेभन स्मिथ नयाँ नाम होइन । बरु विश्वभर रहेका उनका लाखौं समर्थकका लागि उनीमाथि लगाइएको एक वर्षे प्रतिबन्ध कहिले फुकुवा होला भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा थियो । स्मिथ जब ‘बल टेम्परिङ’को आरोप लागेपछि एकवर्षे प्रतिबन्धमा परे, त्यसपछि अस्तव्यस्त बन्यो अष्ट्रेलियाको क्रिकेट यात्रा । अष्ट्रेलियन क्रिकेटमा पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा सफल खेलाडीको सूचीमा रहेका स्मिथको तुलना विश्व क्रिकेटका उदाउँदा स्टार विराट कोहलीसँग गरिन लागेको थियो ।
त्यहीबेला उनीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । धेरैको मनमा आशंका र जिज्ञासा थिए । के स्टेभन स्मिथ प्रतिबन्धपछि पुरानै लयमा देखिएलान् ? के एक वर्षसम्म प्रतिबन्धको सामना गर्न उनको स्थानमा अरु कसैले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्लान् ? तर त्यसो भएन । एक वर्षपछि स्मिथ र डेविड वार्नर टोलीमा फर्किए पुरानै रंगसहित । एकदिवसीय विश्वकपमा स्मिथले औषत प्रदर्शन गरे भने टेष्ट क्रिकेटमा उनी अब्बलमात्रै देखिएनन्, विश्व क्रिकेट वरीयतामा एक नम्बरमा आए । उनको पछिल्लो प्रर्दशन निकै लोभलाग्दो छ । उनको ब्याटबाट निस्किएका प्रत्येक रनले उनका आलोचक र विरोधीलाई गतिलो जवाफ दिएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध टेष्ट क्रिकेटमा बल टेम्परिङ गरेको काण्डमा क्रिकेट अष्टे«लियाले उनलाई एक वर्षे कारवाही गर्यो । उनी त्यसबेला टोलीको कप्तान थिए ।
उनीसँगै उपकप्तान वार्नर र बलर वेनक्राप्ट कारबाहीमा परे । एक वर्ष आफ्नो मुख्य हतियार ब्याटबाट अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नदेखिएका स्मिथ पुरानै अवतारमा देखिए । असारमा इङ्ल्याण्ड र वेल्समा सम्पन्न १२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकपपछि टोलीमा फर्किएका उनी सर्वाधिक चर्चामा छन् ।
खेलाडीका लागि एक वर्ष मैदानमा जान नपाउनु दुर्भाग्य नै हो । उनी त्यो एक वर्षे कठिन समयबाट फर्किए नयाँ उत्साहका साथ । विश्वकपमा राम्रै प्रदर्शन गरे ।
यहि साता उनको प्रदर्शनले विश्वक्रिकेटमा राम्रै चर्चा पाएको छ । घरेलु टोली इङ्ल्याण्डविरुद्धको पाँच खेल खेलेको एसेज सिरिजमा उनको प्रदर्शन क्रिकेट उनका समर्थकका लागि ठूलो खुशीको विषय बन्यो ।
अष्ट्रेलियाले चौथौ टेष्टमा इङ्ल्याण्डलाई १ सय ८५ रनले हराउँदै एसेज ट्रफी रक्षा गर्दा स्मिथ नै त्यसका नायक सावित भए ।
टेष्ट एसेजमा स्मिथको जादूयी प्रदर्शन जारी छ । अष्ट्रेलिया भोलि (बिहीबार) बाट अन्तिम टेष्ट सिरिज खेल्दैछ । चौथो टेष्ट सिरिजसम्म नायक बनेका छन् स्मिथ । त्यसो त टेष्टमा उनको कीर्तिमान नै छ । उनी टेष्टमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका खेलाडी हुन् । समग्रमा सर्वाधिक ६७१ रन बनाएका उनको औषत १३४.२ को छ । यसक्रममा उनले दुई शतक तथा दुई अर्धशतक प्रहार गरे । उनको न्यून रन ८४ रह्यो । एक दोहरो शतक पनि उनले प्रहार गरिसकेका छन् ।
३० वर्षिय स्मिथले २०१० बाट टेष्ट क्रिकेट यात्रा सुरु गरेका हुन् । लर्डस्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेल्दै टेष्ट क्रिकेट यात्रा अगाडि बढाएका उनले अहिलेसम्म ६ हजार ८ सय ७० रन बनाएका छन् । उनी आईसीसीको टेष्ट वरीयतामा शीर्ष स्थानमा छन् । ९ सय ३७ अंकका साथ उनी १ नम्बरमा छन् । भारतका कप्तान विराट कोहली दोस्रो स्थानमा छन् ।